सा`वधान ! यस्ताे सपना देख्नु भयाे भने ख्याल गर्नुहाेस्, यी हुन मृ`त्युकाे भ`विष्यवाणी दिने ११ सपनाहरु (भिडियाे हेर्नुस्) - Info Nepal
INFONPLकला/सस्कृतसा`वधान ! यस्ताे सपना देख्नु भयाे भने ख्याल गर्नुहाेस्, यी हुन मृ`त्युकाे भ`विष्यवाणी दिने ११ सपनाहरु (भिडियाे हेर्नुस्)
सा`वधान ! यस्ताे सपना देख्नु भयाे भने ख्याल गर्नुहाेस्, यी हुन मृ`त्युकाे भ`विष्यवाणी दिने ११ सपनाहरु (भिडियाे हेर्नुस्) । वास्तवमा भन्नुपर्दा ‘सपना’ भनेको हाम्रो अ-वचे- तन मनमा भएका कुराहरूलाई हामी सामुन्ने देखाउने श्रोत भनेर बुझ्न सकिन्छ ।
तर हरेक संस्कृतिले ‘सपना’ लाई भिन्ना भिन्नै दृश्टिकोणले हेर्ने गर्दछ भने हरेकले आफ्नै तरिकाले सपनालाई व्याख्या गर्ने गरेकाे पाईन्छ । कसैले सपनालाई मानिसको मनोविज्ञान बुझ्ने माध्यमको रूपमा हेर्ने गर्दछन् भने कसैले यसलाई अलौकिक शक्तिको रूपमा पनि हेर्ने गरेका छन् ।
त्यसैगरी, ‘मन्दिर गएको’ सपनालाई पनि थुप्रै दृश्टिकोणले हेर्न सकिन्छ साथै थुप्रै तरिकाले व्याख्या गर्न पनि सकिन्छ । तपाईहरुलाई सपनामा ‘मन्दिर गएको’ देख्नुको खास अर्थ के हाे भनेर खुलाउनका लागि यस भिडियाे हेर्न सक्नुहुनेछ :-
याे पनि, गायिका डिला बिक श्रीमान सँग मिडियामा, डिलालाइ दोहोरी खेल्न नदिने भन्दै श्रीमानले पोखे यस्ताे गुनासो (भिडियाे हेर्नुस्) । दोहोरी च्याम्पियनमा सबै भन्दा धेरै रोजाईमा परेको गायिका डिला बिक पहिलोपटक श्रीमान सहित मिडियामा आएकी छिन् ।
आज भन्दा झन्डै ७ बर्ष अगाडी बैबाहिक जीवनमा बाधिएकी डिला बिकको श्रीमान लामो समय देखि विदेश बस्दै आएका थिए । बल्ल नेपाल आएको मौका छोपेर केहि रमाइलो कुराकानी भएको छ । डिला र उनको श्रीमान गणेश बिक बीच प्रेम बिबाह भएको हो । उनीहरु भा-गेर बिबाह गरेका थिए ।
डिलालाइ किन बच्चा जन्माउन ढिला गरेको भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन “पहिले आफ्नो भबिष्य बनाउने तिर सोचियो अब बच्चा जन्माउने हो”एकै छिन हाँसोमा जोडियो अन्तरबार्ता । भिडियाे हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस् ।
निकै भाग्यमानी हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, जसले कमाउँछन् सानै उमेरमा नाम र दाम कुन कुन हेर्नुहोस्
घरमा मनिप्लान्ट लगाउँदा भुलेरपनि नगर्नुहोस् यस्ता गल्ती, नत्र कं`गाल बनिएला !
नेपालीको महान् पर्व बडादसैँ आजबाट सुरु, यस्ताे छ घटस्थापनाको शुभ साइत !
गरुड पुराण अनुसार यस्ता व्यक्तिको घरमा कहिल्यै भुलेर पनि खानुहुँदैन खाना !